एनसेलले सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम कति हो? - JagaranPost
Home/मुख्य समाचार/एनसेलले सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम कति हो?
सर्वोच्च अदालतले एनसेल बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर उठाउन एनसेल र एजियटाको नाममा परमादेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणासहितको बृहत पूर्ण इजलाशले कर असूली गर्न परमादेश दिएको हो । दुबै पक्षको जवाफी बहस पछि प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीश मिरा खड्का, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, आनन्द मोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले पूर्व सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल सहितले दिएको निवेदनमा सुनुवाई गर्दै एनसेलको पुँजीगत लाभकर यहाँ रहेको एनसेल र एजियटाबाट असूल्न आदेश दिएको हो । अर्का रिट निवेदक अधिवक्ता भावेश गौतमको रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ । नयाँ प्रधनन्यायाधीशमा राणा आएपछि गत बिहीबारबाट एनसेल बिक्रीको लाभकर सम्बन्धी रिटमा सुनुवाई जारी थियो । ठूला करदाता कार्यलयका अनुसार एनसेलले सरकारलाई ४९ अर्व ५० करोड रुपैया तिर्न बाँकी छ । ६१ अर्व रुपैया करको ब्याज र हर्जान सहित ७३ अर्व रुपैया पुगेपनि एनसेलले साढे २३ अर्व कर भने सरकारी खातामा जम्मा गरिसकेको छ । हिजो निवेदक ढुङ्गेल र गौतमका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । यस्तै, विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयका तर्फबाट सरकारी वकिलले पनि हिजो बहस सुरु गरेका थिए । दुवै पक्षको बहस सकिएपछि निवेदक र विपक्षी दुबैका कानुन व्यवसायीले स्पष्ट पार्नुपर्ने विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए । एनसेलले नै लाभकर तिर्नुपर्ने पक्षमा निवेदक ढुङ्गेलका कानुन व्यवसायी थिए । एनसेलका तर्फबाट र रिटमार्फत अदालत पुगेका अधिवक्ता गौतमका कानुन व्यवसायीले भने स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने टेलियासोनेराबाट लाभकर असुल गर्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।
एनसेलले सरकारलाई कति तिर्नुपर्ला ?
टेलियासोनेराले एनसेलको आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सेयर मलेसियाको आजिएटालाई बिक्री गरेवापतको पूँजीगत लाभकर कसले तिर्ने भन्ने विषयमा विवाद भएको थियो । आजिएटा र एनसेलले उक्त पूँजीगत लाभकर तिर्ने दायित्व आफ्नो नभएर टेलियासोनेराकै भएको दाबी गर्दै आएका थिए । सर्वोच्च अदालतले एनसेलको सेयर बिक्रीबापतको पुँजीगत लाभकर एनसेल र आजियटाबाटै उठाउन आदेश दिएपछि अब कम्पनीले कति तिर्नपर्ला भन्ने चासो बढेको हो ।ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख धनिराम शर्मा सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ नआउञ्जेलसम्म कसरी कर निर्धारण गर्ने भन्ने निक्र्योलमा पुग्न नसकिने बताउँछन् ।‘फैसलाले पुरानो कर निर्धारणमाथि केही बोलेको छ कि छैन, जानकारी छैन । बाहिर हल्ला सुनिएको भरमा एनसेलले तिर्ने कर यति हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘हामी पूर्ण पाठ आएपछि त्यसअनुरुप नै कर निर्धारण गरेर जानकारी दिन्छौं ।’ टेलियासोनेराले आजियटालाई एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा एनसेल बिक्री गरेको थियो । यही बिक्री मूल्यमा आधार मानेर ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर निर्धारण गरेको थियो । कार्यालयले दुई वर्षअघि एनसेलले कर, ब्याज र जरिवानासहित ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो ।यसमध्ये ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभ करको हिस्सा हो । कार्यालयले एनसेललाई पुँजीगत लाभकर छल्न खोजेको भन्दै १८ अर्ब ६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ जरिवाना पनि निर्धारण गरेको थियो । यस्तै त्यतिबेला कर तिर्न ढिलाइ हुँदा लागेको ब्याज ६ अर्ब ७३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ थियो ।करमा विवाद भएपछि एनसेलले दुईपटक गरेर २१ अर्ब ५४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ तिरिसकेको छ । उसले पहिलोपटक ९ अर्ब ९६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ कर तिरेको थियो भने दोस्रोपटक ११ अर्ब ५७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ कर भुक्तानी गरेको छ । एनसेलले ०७३ वैशाख र ०७४ जेठमा पुँजीगत लाभकरको अगि्रम भुक्तानी गरेको थियो । एनसेलले हालसम्म २ अर्ब बराबरको ब्याज पनि तिरिसकेको प्रमुख शर्माले बताए । यसका आधारमा एनसेलले अब करिब १४ अर्ब ३७ करोड बराबरको पुँजीगत कर तिर्न बाँकी हुने अनुमान छ ।यो तिर्न बाँकी रहेको यो रकममा दुई वर्षको ब्याजसमेत जोड्दा झण्डै ६ अर्ब बराबरको ब्याज पनि थपिनसक्छ । यसअनुसार कर र त्यसमा लाग्ने ब्याज मात्रै पनि कर २० अर्ब माथि जान सक्छ । यो प्रक्रियामा टेलियाले आफ्नो कारोबारको फाइल पेश गरेर दाबी विरोध गरेन भने जरिवाना रकम बापतको १८ अर्ब पनि अशुल गर्नुपर्ने हुन्छ । कारोबार भएको चार वर्षसम्म करदाताले विवरण बुझाउन समय पाउने भएकाले एनसेललाई अहिल्यै जरिवाना निर्धारण गर्न सकिने छैन ।‘टेलियाले आफ्नो विवरण ल्यायो भने हाम्रो एसिसमेन्ट त्यसमा प्रतिस्थापन हुन्छ’ शर्माले भने,’अब टेलियाले के गर्छ र अदालतको आदेश कस्तो किसिमको छ भन्नेले कर फरक पर्न सक्छ ।’ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार अहिले नै यति कर तिर्नुपर्छ भन्नु हतार हुन्छ । अदालतको आदेशले कसबाट कसरी कर लिनु भनेको छ, त्यसैअनुसार सरकार अघि बढ्ने शर्माको भनाइ छ ।